World Resorts	Imigomo yokusetshenziswa
By zokungena lokhu site, uyavuma ukuba sizibophezele kule web indawo Imigomo neMibandela Yokusebenzisa, yonke imithetho nemigomo esebenzayo, futhi uyavuma ukuthi unesibopho for ukuhambisana nanoma yiziphi izinhlinzeko imithetho esebenzayo yendawo. Uma ungavumelani yimuphi wale migomo, awuvumelekile usebenzisa noma ukufinyelela le site.
Imvume nikuphiwe okwesikhashana thwebula ikhophi yezinto (ulwazi noma software) esakhiweni web Meteodb for siqu, non-commercial wokubuka ehlala kuphela. Lokhu ukuhlinzekwa ilayisensi, hhayi ukudluliselwa isihloko, futhi ngaphansi kwale layisensi awukwazi:
shintsha noma ukukopisha izinto;
Izinto ezisetshenziselwa izinjongo zezomnotho noma yimuphi obala (commercial noma non-commercial);
lizame ahlakaze noma ukuhlanekezela ukuklama noma iyiphi isofthiwe kwi web site Meteodb;
ukususa noma yikuphi copyright noma ezinye netinkhomba nokuphathelene kusukela izinto; noma
ukudlulisa izinto komunye umuntu, "mirror" the izinto iyiphi enye server.
Le layisensi uyobuqeda ngokuzenzakalelayo uma esephula kwalezi zingqinamba futhi kungapheliswa ngasiphi isikhathi Meteodb. Phezu kokuvala wokubuka yakho lezi zinhlobo noma phezu ukuqedwa kwale layisense, kuzomele silahle noma yiziphi izinto alandiwe yifa lakho ukuthi format electronic noma ephrintiwe.
Izinto esakhiweni kukhona Meteodb enikeziwe "njengoba injalo". Meteodb kwenza yimaphi amawaranti, ukuveza noma somlomo, futhi ngalokhu uyawachitha kanye negates zonke ezinye iziqinisekiso, kuhlanganise ngaphandle komkhawulo, amawaranti noma imibandela IMPAHLA lisho, ukuqina ngenjongo ethile noma non-amalungelo empahla noma ezinye ukwephulwa kwamalungelo. Ngaphezu kwalokho, Meteodb akaqinisekisi noma ukwenza izethulo mayelana nokunemba, cishe imiphumela, noma ukuthembeka ukusetshenziswa izinto web-Inthanethi noma ngenye eziphathelene izinto ezifana noma kunoma iyiphi amasayithi ahlobene nathi kule sayithi.
In umcimbi Meteodb.com noma abaphakeli babo babe nesibopho sokukhokhela umonakalo (kubandakanya, ngaphandle kokuba nomkhawulo, umonakalo ukulahleka kwedatha noma inzuzo, noma ngenxa ibhizinisi kokuphazanyiswa,) olulandela ukusetshenziswa noma ukungakwazi ukusebenzisa izinto kwi website Meteodb e ngisho Meteodb Meteodb noma ummeleli ogunyaziwe uwazisa ngomlomo noma ngokubhala kungenzeka umonakalo onjalo. Ngoba ezinye izindawo musa ukuvumela imikhawulo esicatshangwayo, noma ukulinganiselwa sezomthetho wamabomu, noma ohambisana, lezi ukulinganiselwa kungenzeka kungakuthinti wena.
5. Izinguquko kanye nokulungiswa
The izinto ezazikulo esakhiweni web Meteodb kungafaka lobuchwepheshe, typographical, noma amaphutha lokushicilela. Meteodb hhayi isiqiniseko sokuthi bonke abantu izinto esizeni sayo kukhona inembile, iphelele noma lamanje. Meteodb lingenza izinguquko izinto eziqukethwe kwi web-Inthanethi nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso ngaphambi. Meteodb akusho Nokho, ukwenza noma yikuphi ukuzibophezela ukuvuselela izinto.
Meteodb hhayi kubuyekezwe yonke amasayithi ahlobene nathi ngenxa yayo indawo Internet, futhi akuyena obangela okuqukethwe kwanoma iyiphi ezinjalo. The ukufakwa kwanoma iyiphi isixhumanisi akusho ukuvumela Meteodb indawo. Ukusetshenziswa kwanoma iyiphi amawebhusayithi anjalo ngentando yakho.
7. Izinguquko Imigomo yokusetshenziswa
Imibandela nemibandela ehambisana ukusetshenziswa website.
Imigomo yokusetshenziswa Inqubomgomo yemfihlo Oxhumana 2020 Meteodb.com. Weather on zokungcebeleka izinyanga, izinga lokushisa lamanzi, inani kwezulu. Thola kuphi ukuphumula futhi lapho manje isizini. Page load 0.0279 s. ▲